“Hampahafantatra ahy ny làlan’aina Hianao; fa havokisam-pifliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tànanao an-kavanana mandrakizay” Sal. 16:11
Nandritra ny asa fanompoana nataon’i Jesosy dia saika teny an-kalamanajana avokoa ny ampahany betsaka tamin’ny fiainany. Ny ankamaroan’ireo fampianarana nomeny dia saika natao teny an-kalamanjana.
Voalaza ao amin’ny Baiboly fa ny lova ho an’ny voavonjy dia antsoina hoe “tanàna” (Heb. 11:16). Any no hitarihan’ilay Mpiandry ondry avy any an-danitra ireo ondriny mba ho any amin’ilay loharano misy ny rano velona. Mamoa voa isam-bolana ny hazon’aina, ary ny ravin’io azo io dia natao hampiasaina amin’ny asa fanompoana ny firenena. Misy rano mikoriana mandrakizay any, madio sy mangarahara, ary eo anilany misy hazo mihofahofa, ary ny alok’izy ireo manaloka ilay lalana efa nomanina handehanan’ireo olona efa navotan’ny Tompo. Hita any ihany koa ireo lemaka midadasika, ary ireo tendrombohitr’Andriamanitra hohakarina amin’ny tendrony ambony indrindra. Eny amin’ireny lemaka feno fiadanana ireny, eny anilan’ireny rano velona mikoriana ireny, no ahitan’ireo olon’Andriamanitra, izay nivahiny sy nirenireny nandritra ny fotoana ela, trano fonenana.
Asehon’ny Baiboly ho hitantsika ireo harena miafina sy haren’ny lanitra tsy mety maty. Ny firehana lehibe indrindra ao anatin’ny olombelona dia manosika azy hitady sy hikatsaka fifaliana ho an’ny tenany manokana, ary eken’ny Baiboly io faniriana io, ary asehony antsika fa hikalbana amin’ny olona amin’ny heriny rehetra ny lanitra manontolo amin’ny fiezahany hikatsaka ny fifaliana marina. Aseho amin’izany ireo fepetra takina hahafahana manome ny fiadanan’i Kristy ho an’ny olona. Asehon’ny Baiboly ireo famariparitana ny amin’ny trano fonenana, izay misy fifaliana mandrakizay sy tanamasoandro , itsy ahitana tomany na filana intsony.
Aoka ny zavatra tsara tarehy rehetra ao ami’nny tranontsika ety an-tany mba hampahatsiahy antsika ny fisian’ilay rano kristaly sy ireo saha maiso tamn-davana , ireo hazo mihofahofa sy ireo loharano velona, ilay tanàna mamirapiratra sy ireo mpihira manao akanjo fotsy, izay any amin’ny tranontsika any an-danitra – ilay tontolo feno hatsarana , izay tsy misy mpahay hoso-doko na dia iray aza mahavita manao sary azy, ary tsy hain’ny lelan’olombelona mety maty faritana.
Hitoetra mandritra ny mandrakizay ao amin’io tranon’ny olona masina io, hitondra ao ami’nny saina, vatana, ary fanahy, tsy ny soritra maizin’ny fahotana sy ny ozana, fa ny fitoviana tonga lafatra amin’ilay Mpamorona antsika, ary mandritra ny taona tsy misy fahataperana handroso ho amin’ny fahendrena, fahalalana, ary amin’ny fahamasinana, handalina seha-pahalalana vaovao hatrany, hahita zava-mahagaga vaovao sy voninahitra vaovao, hitombo eo amin’ny fahaizana mahatakatra zavatra, ny mifaly, ny fahaiza-mitia , ary mahafantatra fa mbola misy fifaliana sy fitiavana ary fahendrena tsy manam-pahataperrana tsy takatry ny saintsika – ireo ny zavatra tondroin’ny fanantenana kristianina.